आमाले सोनिकालाई भनिन्, ‘१२ लाख चोरेको आरोप लाग्दा केही नबोल्ने पारसको संगत नगर’ (भिडियो) -
आमाले सोनिकालाई भनिन्, ‘१२ लाख चोरेको आरोप लाग्दा केही नबोल्ने पारसको संगत नगर’ (भिडियो)
काठमाडौं। आफ्नो छोरीलाई पूर्व युवराज पारसको १२ लाख रुपैया चोरेर भागेको भनेर लागेको आरोपका बारेमा सोनिकाको आमाले पनि थाहा पाएको बताएकी छन् । कोरोना फैलन नदिन सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि युट्युवर तथा मोडल सोनिका रोकाय अहिले आफ्नो घर बझागं पुगेकी छन् । उनी बझागं गएको बेलामा सोनिकालाई यस्तो आरोप लागेको हो । सोनिकाले आफुमाथि लागेको यस्तो आरोपको खण्डन पनि गरेकी छन् ।
उनले त्यस्तो आरोप लगाउनेहरुलाई आफुले प्रश्न गर्न चाहेको बताएकी छन् । उनले त्यसका बारेमा पूर्व युवराज पारसलाई पनि प्रश्न गर्न चाहेको बताइन् । घरमा कोदो कुट्दै बसेकी सोनिकासंग कुरा गर्दै सोनिकाको आमाले पारससंग त्यो कुरा कसरी आयो भनेर सोध्न मन लागेको बताइन् ।
उनले आफ्नो छोरीलाई त्यस्तो आरोप लगाउनेहरुले प्रमाणीत गरेर देखाउनुपर्ने बताइन् । उनले पूर्व युवराज पारससंग संगत नगर्न सुझाव दिएकी छन् । उनले भनिन्, पारससंग नै संगत नगरे के हुन्छ, सबैले राम्रो मानेका छैनन् भने किन संगत गर्ने । आमाले त्यसो भन्दा सोनिकाले पारसलाई बाहिरवाट हेर्नेहरुले नराम्रो मान्ने गरेको बताइन् । उनले पारसलाई पनि अनावश्यक आरोप लगाउने गरेको बताइन् ।
सोनिकाकी आमाले आफुले पहिला देखि नै पारसको साथ नलाग भनेर सुझाव दिने गरेको बताइन् । उनले अर्काको छोरीवेटीलाई किन आरोप लगाएका छौं भनेर पारसले किने प्रश्न गर्दैनन् ? सोनिकाकी आमाको तर्क छ ।
आफुलाई पूर्व युवराज पारसको १२ लाख चोरी गरेको आरोप लागेपछि युट्युवर तथा मोडल सोनिका रोकाय आ क्रो शित भएकी छन् । उनले फेसवुक लाइभ मार्फत सो कुराको जवाफ दिँदै त्यसको ब्याग्यात्मक प्रतिकृया दिएकी छन् ।
वझागंका एक आफन्तसंग कुरा गरेकी सोनिकाले आफुले १२ लाख होइन १२ करोड चोरेको भन्दै ब्याग्यात्मक प्रतिकृया दिएकी छन् । उनले आफ्ना विरुद्ध एक पछि अर्को झुटो आरोप आउने गरेको गुनासो पनि गरेकी छन् ।
कुन दिन जन्मेछु जस्तो लागेको छ, मेरो भाग्य नै फु टे छ की के हो ? हेर त भाई १२ लाख चोर्न भुत पठाएको हो की क्या हो ? प्रहरीले पनि लग्दैन की क्या हो । म त अब पुलिसलाई १२ लाख होइन १२ करोड चोरेको हो भनेर भन्दा पनि पत्याएन । पुलिसले पनि लगेन के गर्ने होला ? उनले भनिन् । एक युवकलाई भाई भन्दै उनले भिडियो च्याटमा जति आरोप आएपनि हाँसेर बाँच्ने बताएकी छन् ।